Nikaragoà: Nivelatra noho ny fiaraha-miasa ny tontolom-bolongana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2008 9:12 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, 简体中文, Español, বাংলা, English
Ity lahatsoratra manaraka ity dia resadresaka tamin'ny alalan'ny imailaka nifanaovana tamin'i Alvaro Berroteran izay loharano nipoiran'ny Nicaragua Y Su Blog [es], bolongana iray manandratra ny bolongana vaovao sy izay efa misy ao amin'ny tontolom-bolongana Nikaragoana.Mipetraka ao an-tanànan'i Granada i Berroteran ary miasa amin'ny haiendrika vohikala (web design), fa mpanao hosodoko kosa izy eo amin'ny raharaha. Tsy ela akory izay, noho ny fampiasana ny fitaovan'ny web 2.0, tahaka ny Twitter, no niserasera tamin'ireo ao amin'ny tontolombolongana Nikaragoana i Berroteran hifanampian'izy ireo amin'ny fananganana tetikasa aovao iray antsoina hoe Blogs Nicaragua [es].
Global Voices: Oviana moa no nanomboka ny Nicaragua Y Su Blog?
Alvaro Berroteran: Herintaona izay no nisantarako ny Nicaragua Y Su Blog izay nokendreko hampakatra avo ny bolongana Nikaragoana. Nikaroka aho ary nahatsikaritra fa tsy misy ny lisitry ny bolongana Nikaragoana, nefa manana ny azy kosa ireo firenena manodidina. Nahatsiaro manirery ihany aho, nahatsiaro singany ary tsy nahalala zavatra maromomba ny tontolombolongana. Tsaroaka ilay oha-pitenenana manao hoe: ” Tsy misy ny lalana ry mpandeha an-tongotra, fa Forony ny lalana eny am-pandehanana” dia teraka teo ny Nicaragua Y Su Blog?
GV: Inona ireo bolongana taloha indrindra tsaroanao ho novakianao?
AB: Bolongana 5 aloha no nanombohako, ary ao anatin'izany ilay manam-pahombiazana Sergio Simpson. Tao amin'ny sokajin'ny bolongana Nikaragoana no nanampiako rohy ny bolongana rehetra misy ifandraisany amin'i Nikaragoà. Neken'ny mpamaham-bolongana manana ny lazany mora foana avy eo ny fikendreko hanangana bolongana nikaragoana iray ikambanana. Isaorana i Byron Corrales izay afaka nirohy tamin'ity bolongna ity ary nanaiky ho mpikambana amin'io fiaraha-monina io, mba hahalalantsika fa misy ny mpamaham-bolongana vaovao ary mba hahatsiarovantena fa tsy irery akory izy ireo.
GV: Nanao ahoana ny fifandraisana tao amin'ny bolongana ikambanan'ny Nikaragoana?
AB: Volana vitsy lasa izay dia novelomiko indray ny fampiasana ny Twitter-ko ary fantampantatro kely ihany ka hiroborobo tokoa ny bolongana Nikaragoana. Tao no nahitako olona samihafa tahaka an'i Rodrigo Peñalba, Juan Ortega, Adolfo Fitoria, Elie Herrera, Igor sy ny hafa koa izay te-handray anjara tamin'ny fanatanterahana ny nofinofiko, dia ny hampivelatra sy ny handrafitra ny Bolongana Ikambanan'ny Nikaragoana.
Nandalo zavatsoa sy zavatsarotra teny ihany ny bolongako nandritra ny herintaona sy tapany, fa misy kosa ny fotoana izay tena nananako fifaliana. Iray tamin'ny tolona nandamoka niainako ny hanolotra fampiantranoana bolongana baojo ho an'ny Nikaragoana. Ohatra amin'ireny ny Blognica.com. Manantena aho fa indray andro any mbola hahomby izany (dika mivantana: mbola ho afaka hanandrana indray aho). Fa anisan'izay tena nahafaly ahy kosa ny fiaraha-miasa azoko tamin'ny mpamaham-bolongana Nikaragoana, niresaka ny traikefa nananany tany amin'ny bolongany. Ny fototra nanaovana izany moa dia tamin'ny fametrahan'ny iray ny rohin'ny olona hafa tamin'ny fandrafetana rojom-bolongana.
GV: Inona indray ary ny fikasana ataonareo amin'ny ampitso ho an'ny tontolom-bolongana Nikaragoana?
AB: Tena ao anatin'ny firaisankina tokoa izahay ankehitriny. Nanangana ny vondrona Facebook ho amin'ny fiarahamonim-bolongana Nikaragoana izahay ary hita ao amin'ny Twitter noho ny fahafoizan-tenan'i Juan Ortega. Na izany aza dia mbola be ny asa miandry, ary ankasitrahana i Igor, sy ny nikaragoana rehetra sy ny olona hafa manerantany izay maneho izay mitranga ao amin'ny tontolom-bolongana Nikaragoana amin'ny alalan'ny fitsidihana ny Blogs Nicaragua.